कलेज वा विश्वविद्यालय लागि तिर्ने | USAHello देखि शिक्षा स्रोतहरू | USAHello
कलेज धेरै महंगा हुन सक्छ. यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा विद्यार्थी आफूलाई कलेज को लागत देखि ऋण को ठूलो रकम संग पाउन को लागि सजिलो छ. त्यहाँ कलेज लागि तिर्नुपर्ने धेरै विकल्पहरू छन्, तथापि. सरकार ऋण बारेमा जान्न, निजी ऋण, अनुदान र छात्रवृत्ति.
केही विद्यार्थी सरकारबाट ऋण संग कलेज भुक्तान. धेरै विद्यार्थीहरूको लागि, यो तिनीहरूले कलेज लागि तिर्ने जब हेर्न पहिलो स्थानमा छ. जब तपाईं सरकारबाट ऋण लागि लागू, रुचि संग पैसा चुक्ता गर्न छ. यो तपाईं संग जोडी अतिरिक्त मुद्रा यसलाई फिर्ता अर्थ. धेरै स्नातकहरूको आफ्नो विद्यार्थी ऋण फिर्ता तिर्ने वर्ष खर्च.
सरकारबाट एक ऋण को लागि लागू गर्न, तपाईं पूरा गर्न संघीय विद्यार्थी सहायता लागि निःशुल्क आवेदन (FAFSA). को FAFSA पूरा धेरै जटिल र भ्रामक छ. के तपाईं मदत गर्न एक स्कूल सल्लाहकार पाउन सक्छ.
अनुदान र छात्रवृत्ति उपकारको साटो तिरे गर्न छैन भनेर हो वित्तीय सहायता. कम आय परिवार तिनीहरूलाई कलेज भुक्तान गर्न मद्दत गर्न अनुदान वा छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्छन्. अनुदान संघीय सरकार वा राज्य सरकार देखि आउन सक्छ. USAHello सूची छ शरणार्थी र आप्रवासी लागि छात्रवृत्ति. तपाईं आफ्नो कलेज कुनै पनि छात्रवृत्ति र स्थानीय संगठन बाट लागू गर्न सक्नुहुन्छ.
निजी ऋण संगठन देखि ऋण हो (यस्तो बैंकहरू रूपमा) वा व्यक्तिहरूलाई देखि - उदाहरणका लागि मित्र वा आफ्नो परिवारको सदस्य. निजी ऋण कहिलेकाहीं धेरै उच्च ब्याज दर छ. तपाईं कलेज शुल्क वा जीवित खर्च लागि पैसा उधारो निर्णय गर्नु अघि, तपाईं एक स्कूल सल्लाहकार वा कसैले तपाईंलाई मदत गर्न र बनाउन सक्छ जो कुरा गर्नुपर्छ पक्का ऋण बुझ्न. तपाईं पनि गर्न सक्छन् बारेमा क्रेडिट कार्ड र ऋण थप पढ्नुहोस्.
केही विद्यार्थी विद्यालय भाग-समय भाग-समय जा र काम गरेर कलेज भुक्तान. कहिलेकाहीं, विद्यालय भनेर तिनीहरूलाई परिसर मा काम गर्न र देखि भुक्तानी प्राप्त अनुमति विद्यार्थी अनुदान दिन हुनेछ संघीय कार्य अध्ययन धन. वा तपाईंले लचिलो घण्टा छ भनेर कलेज धाउन सकून् एक भाग-समय काम बन्द क्याम्पस लागि हेर्न सक्छन्.
तपाईं काम गर्दै गर्दा यो कलेज जान धेरै गाह्रो हुन सक्छ, तपाईं एक परिवार छ, विशेष गरी यदि. पक्का छात्रवृत्ति र FAFSA मार्फत साथै लागू बनाउन.